Qasaaro Balaaran Oo ka dhashay Dabkii Maanta ka kacay Suuqa Shidaalka Black Sea +SAWIRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Qasaaro Balaaran Oo ka dhashay Dabkii Maanta ka kacay Suuqa Shidaalka Black Sea +SAWIRO
Waxaa maanta dab xoogan oo dhaliyay qasaare maaliyeed oo aad u badan uu ka kacay suuq Shidaalka Black Sea ee Magaalada Muqdisho , waxaana daminta dabkaasi gacan weyn ka geestay gawaarida dab damiska ee Maamulka Gobolka Banaadir iyo kuwa Shirkada Hurmuud.
Dabka oo ahaa mid aad u xooganaa ayaa socday mudo ka badan saacad, waxaana ku adkaatay gawaarida dab damiska in dabkaasi ay si fudud ku damiyaan, iyadoona saacad ka badan uu dabkaasi socday kuna fiday goobobadan.
Gawaarida dab damiska ayaa ugu dambeyn ku guuleestay in ay damiyaan dabkii ka kacay Suuqa Shidaalka, waxaana halkaasil agu arkayay masuuliyiin katirsan Maamulka Gobolka iyo Saraakiil ciidan oo gacan ka geesanayay daminta dabkaasi.
Gudoomiyah Degmada Howlwadaag Axme Nuur Cabdi Siyaad oo Warbaahinta kula hadlay halka uu dabku ka kacay ayaa sheegay in qasaaro xoogan uu dabkaasi ka dhashay ayna dib kasoo gudbin doonaan qasaaraha dabkaasi ka dhashay.
Boqolaal dadweyne oo xaafadaha Muqdiho ka kala yimid, Masuuliyiin iyo Ciidamo ayaa gacan ka geestay daminta dabkaasi, waxa uuna dabkan ahaa mid aad u xooganaa oo uurada iyo holaciisa laga arkayay inta badan Magaalada Muqdisho.